Hambalyo Gudoomiyaha Sharciga ah,Mudane Baashe
Monday August 07, 2017 - 20:05:36 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Hambalyo MudaneGudoomiye,Xilkaa laguu doortay ee gudoominta Wakiilada shacabka Somaliland,waxaa la socda oo la miisaan ah Midaynta iyo turxaan bixinta walaalaha Somaliland ee Illaahay isu dooray wada noolaanshahooda.Kusoo dhawoow mid ka mid ah hab maamuuska ugu sareeya Jamhuuriyadda ee shacabkaagu kuu gartay.
Sool,Cayn,Sanaag iyo Sanaag Bariba meeshii Telefishin midab leh la idinka daawadosadexdiina Oday ee Wasiirada Gaashaandhiga,Arimaha Gudaha iyo adiga oo ah Gudoomiyaha Baarlamaanka Jamhuurida Somaliland,cid kastoo shaki kaga jirey wax wada lahaanshuhu way idiin soo hiloobi doonaan,hadii telefishin Madaw iyo Cadaan ahlagaa daawadona waxaad u ekaanaysaa Mudane Cali Khaliif Galaydh iyo Garaadka guud oo isku jira.
Waxaan isagana usii hambalyaynayaa Xildhibaan Bukhaari oo Todobaadka dambe bilawgiisa loo doorandoono Gudoomiye xigeenka Baarlamaanka,inkastoo ay kala siyaasad ahaayeen Musharax Cirro hadana hadii Madow iyo Cadaan lagu daawado dad badan ayaa kaga samraya maqnaanshaha Dr Cirro.Mudane Keyse Cabdi Yuusuf isagana aynu ugu hambalyeyno xilka loo rajeynayo ee Madaxweyne ku xigeenka Khaatumo.
Waxaan iyana u hambalyaynayaa Marwo Edna Aadan oo loo magacaabay Ergayga gaarka ah ee wada hadalada Somaliland iyo Somaliya.Fariidnimada Musharax Faysal,WanaaggaMusharax Cirro iyo Hawlkarnimada Musharax Biixi oo laysku daray waxaad dheertahay Codkarnimo iyo Cimri Siyaasadeed.Soomaaliya go'aankeedu waa inaynaan wada hadlin,hadaynu wadahadlaynana inaynaan wax macna leh ka wada hadlin,guushaadu waa intaas oo aad markhaati Caalami ah u hesho.
Hadii miisaaniyadda Wasaarada arimaha dibadda dib loo eegi karayo,waxaa wacan in dib loo dhegeysto hadalkii Mujaahid Cali gurey iyo fikirkiisa waxa Muqdisho gudaheeda ka suurto geli kara,iyana waa in la xoogeeyaa Safaarada aynu ku leenahay Iitoobiya,hawlwadeenada halkaa joogana lagu kaabaa Aqoonyahano wax kara si aynu u korino isusoo dhawaanshaha inaga iyo wadamada laysku yidhaahdo IGAD.
Waxaan isagana u hambalyaynayaa Gudoomiyaha Telefishinka Star ee Hargeysa,Qoraa,Suxufi Maxamed Baashe oo shaqaalaysiiyey laba ka mid ahmuwaadiniinta aynu u baahanahay inaynuil gaar ahku eegno ee laxaadkoodu kala dhimanyahay.Ninka guri kale kaa casuuma Nimanyaal dheh.